အောက်ချင်း၊ တောင်ပီစူးနှင့် အလားတူငှက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
အောက်ချင်း၊ တောင်ပီစူးနှင့် အလားတူငှက်များ
Temporal range: Eocene ကာလ မှ လက်ရှိခေတ်
တောင်ပီစူးငှက် (Upupa epops)
အနောက်ပိုင်းဒေသ ယောင်ယင်မျိုးရင်းဝင် နှုတ်နီငှက်တစ်ကောင် (Tockus kempi)
မျိုးရင်း နှင့် မျိုးရင်းငယ်များ
အာဖရိက သစ်သီးစားယောင်ယင်ငှက် (Bucorvidae)
အောက်ချင်း၊ တောင်ပီစူးနှင့် အလားတူငှက်များ (Bucerotiformes) သည် အောက်ချင်းငှက် မျိုးရင်းဝင်ငှက်များနှင့် တောင်ပီစူးငှက် မျိုးရင်းဝင်ငှက်များ၏ မျိုးရိုးဆင်းသက်လာမှု တူညီသော ငှက်များကို စုဖွဲ့ထားသည့် ငှက် မျိုးစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤငှက်များကို ယခင်က ပိန်ညင်းနှင့် အလားတူငှက်များ (Coraciiformes) မျိုးစဉ်အောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် ငှက်များဖြစ်သည်။
သို့သော် မကြာသေးမီက လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအရ အောက်ချင်းငှက်များနှင့် အာဖရိကမှ သီးနှံစားအောက်ချင်းငှက်များမျိုးစု (Bycanistes) တို့သည် သီးခြားမျိုးတူအစု (Clade) အဖြစ် ယောင်ယင်ငှက် မျိုးရင်း (Bucerotidae) အောက်တွင်တည်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး ၎င်းမျိုးရင်းသည်လည်း တောင်ပီစူးငှက် မျိုးရင်း (Upupidae) နှင့် ပို၍အမျိုးနီးစပ်သောကြောင့် ၎င်းငှက်မျိုးရင်းနှစ်ခုကိုပေါင်း၍ သီးခြားမျိုးစဉ်အဖြစ် ခွဲထုတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤမျိုးစဉ်ဝင်ငှက်များကို အာဖရိက၊ အာရှ၊ ဥရောပနှင့် မီလန်နီးရှားဒေသများ၌ဖြန့်ကျက်တွေ့ရှိရသည်။
↑ Mousebirds, Cuckoo Roller, trogons, hoopoes, hornbills။ World Bird List Version 9.2။ International Ornithologists' Union (2019)။
↑ "Molecular support forasister group relationship between Pici and Galbulae (Piciformes sensu Wetmore 1960)" (2003). J. Avian Biol. 34 (2): 185–197. doi:10.1034/j.1600-048X.2003.03103.x.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အောက်ချင်း၊_တောင်ပီစူးနှင့်_အလားတူငှက်များ&oldid=711587" မှ ရယူရန်
၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၅:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။